အမျိုးသားထုကြီးကို သူမဝတ်ပြီးသား မလျော်ရသေးတဲ့အတွင်းခံတွေ ရောင်းချပေးသွားမယ့် နန်းမွေစံ…. – Alanzayar
အမျိုးသားထုကြီးကို သူမဝတ်ပြီးသား မလျော်ရသေးတဲ့အတွင်းခံတွေ ရောင်းချပေးသွားမယ့် နန်းမွေစံ….
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံ ကတော့ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော် လေးဆို ရင် လည်းမမှားပါ ဘူး..။ သူမက တော့ ယခု မှာ အလန်းစား ဖက်ရှင် လေးကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှတရားလေးပေါ် လွင်နေပြီး အမိုက်စား ပိုစ့်လေး တွေ ပေးနေခဲ့ပါ တယ်..။
သူမရဲ့ အသည်း ယားစရာပုံစံလေး နဲ့ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေဟာ ပရိသတ် တွေကို အချစ် တွေပိုစေခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိ အောင်မြင်လျက် ရှိ နေတဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါ တယ်..။ပရိသတ်တွေ အတွက် Private Groupလေး တည်ထောင်ပြီး အခကြေးငွေ နဲ့ သူမရဲ့ အကြမ်းစား ပုံတွေနဲ့ ဗီဒီယို များစွာကို ပြသနေတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်နော် ။
အခုမှာ တော့ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပုရိသတွေ အတွက် သတင်းကောင်းလေ းတစ်ခု ပြောပြပါလာပြီနော် ။ သူမ ကိုယ်တိုင် ဝတ်ပြီး မလျှော်ရ သေးတဲ့ အတွင်းခံ တွေနဲ့ အဝတ်အစား တစ်ချို့ကို ပြန်လည် ရောင်းချပေးမယ့် အကြောင်းလေးကို ပြောပြ ပေးသွားပြန်ပါပြီနော် ။ crd
Previous Article မင်း အော င် လှို င်အ မြင် မှန်ရပြီး ကိုယ့်နေရာ ကို ယ် သိဖို့ ဦး ရဲ ထွ ဋ် မှ ဥ ပ မာပေး၍ အကြံ ပြုလိုက်သည့် ….
Next Article မင်္ဂ်လာဆောင် အကြိုဓာတ်ပုံ ရိုက်ရာမှ ပို့စ်ပေးတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးနှစ်ယောက်သား သဘောထားခြင်း မတိုက်ဆိုင်ရာမှ နပမ်းသတ်ခဲ့ကြသည့် စုံတွဲနှစ်ဦး